Application Server ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးလို့ရလဲ — MYSTERY ZILLION
Application Server ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးလို့ရလဲ
November 2013 edited November 2013 in Windows Server
Application Server တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ တစ်ခြား Clients Computers တွေကနေပြီးတော့ Server ပေါ်က Program ကိုယူသုံးလို့ရပါသလား။ Clients Computers တွေကနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ Program ကို အချက်အလက်တွေသိမ်းလို့ရပါသလား.....လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို Program ကနေပြီး မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ Printer တွေဆီမှာ Print ရောထုတ်လို့ရပါသလား...ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးနော်....................
What is your understanding of Application Server? I can suggest you about the software architecture, but I need to know what is your understanding of Application Server.
ကို CalmHill ကျွန်တော်မသုံးဖူးပါဘူး။ဒါကြောင့် စိတ်ထဲထင်တာကိုမေးလိုက်တာပါ....ဖြစ်ချင်တာက Application Program တစ်ခုကို Server ပေါ်မှာ Run ထားပြီးတော့ Clients တွေက နေပြီး လှမ်းပြီး အချက်အလက်တွေဖြည့်တာနောက် ကြည့်တာတွေလုပ်ချင်တာပါ...အဲလိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲခင်ဗျာ........
application program ထက် web application ဆိုရင် ပိုအဆင်မပြေဘူးလား ?
ASP.NET , ဒါမှမဟုတ် PHP နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ Web server တစ်ခုထားပြီး IP ကို access လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် hosts file မှာ domain ပေးပြီး access လုပ်တာ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အင်း Microsoft သုံးပုံရတယ် အဲဒါတွေက တကယ်တမ်းက အကြီးကြီးတွေပါ အဲလောက်သုံးရမယ့် အလုပ်မျိုးကတော့ အတော်ရှားပါလိမ့်မယ် နောက်တခုက Implementation ဆိုတာထက်ပိုတယ် Architecture ဖြစ်နေတယ် သုံးတာမသုံးတာနောက်ထား စမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ လုပ်ကြည့်ပေါ့။
Application Server တွေက အရင်ကတော့ COM, DCOM, COM+ တွေရှိတယ် Business Logic တွေကို Implement လုပ်ပြီးတော့ Application Server အဖြစ်နဲ့ထားတယ် Windows Native Client တွေ IIS ကနေတဆင့်လည်း Web Client တွေကယူသုံးတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်တာက Multiple Platform အတွက် Business Logic တွေကို Re-implement မလုပ်ပဲနဲ့ ယူသုံးလို့ရဖို့နဲ့ Computing Requirement များတဲ့ Business Component တွေအတွက် Data Layer or Presentation ကနေခွဲထုတ်ထားတာ။
အရင်ကတော့ Application Server တွေနဲ့ Native Client တွေကြားမှာ အဆက်သွယ်လုပ်ဖို့အတွက် Protocol တခုလိုတယ် အဲဒီအတွက်ကို Message Queue Server တွေသုံးတယ် Client ကနေ Application Server ကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ချင်ရင် Message တခုကို Message Queue Server ပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ် Application Server ကလည်း Message Queue Server ကို အမြဲကြည့်နေတယ် သူ့အတွက်ရောက်လာရင် Process လုပ်ပြီးတော့ Result ကို Message Queue Server မှာပြန်ပို့ Message Queue Server က Client ကိုတဆင့် အကြောင်းကြားပြီးတော့ Client က Result ကို Present ပြန်လုပ်ပြတယ်။
အဲဒီအချိန်က Client နဲ့ Message Queue Server ဟာ Same Technology ကိုသုံးပြီးတော့ ရေးထားရတယ် မဟုတ်ရင် အဲဒီနှစ်ခုက အဆက်သွယ်လုပ်လို့မရဘူး။ အခုခေတ်မှာတော့ Message Queue နေရာအတွက် HTTP ကို ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ Different Technology ဖြစ်နေလည်း အလွယ်တကူ အဆက်အသွယ် လုပ်လို့ရသွားတယ်။ အဲဒါတွေက Web Service ပေါ့ SOAP, RESTful စသည်ဖြင့် ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုပဲ COM, COM+, DCOM တွေကလည်း ခက်လွန်းတာရယ် .Net Framework အစားထိုးချင်တာရယ်နဲ့ Business Component တွေလည်း .Net Componet တွေဖြစ်ကုန်တယ်။
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် WCF အောက်မှာ Basic WCF Programming ဆိုတာရှိတယ် အဲဒီမှာ နမူနာအနေနဲ့ Calculator Service ကိုစမ်းပြထားတယ် Server, Client, Deployment အကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်။ Client ကတော့ Native Windows Client ပဲပါတယ် တခြား Language တွေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုရေးကြည့်ရမယ်။ Deployment ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Service ကို IIS မှာ Deploy လုပ်ပြတယ် Windows Service အဖြစ်နဲ့လုပ်တယ် နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင် exe server တစ်ခုနဲ့ Deploy လုပ်ပြတယ်။
တကယ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ် အသုံးချလောက်မယ့် Application နည်းလွန်းလို့ပါ စိတ်ဝင်စားရင် အချိန်ရှိရင်တော့ ဖတ်ပါစမ်းကြည့်ပါ ကောင်းပါတယ် လေ့လာဖို့အတွက် အချိန်အများ ကြီးပေးရလိမ့်မယ် Implementation ကအရင်ခေတ်တုံးကလို COM, COM+ တွေလို မခက်တော့ပေမယ့် Beginner ကနေ Advance စပြောင်းတဲ့လူဖြစ်ရင်တော့ Concept ကို ချဲ့ပြီးမြင်ကြည့်ရတာ နည်းနည်းခက်မယ်။
ကိုစေတန်ပြောသလိုတော့ စဉ်းစားမိတယ် Window Application ထက်စာရင် XMAPP Web Server တစ်ခုထားပြီးတော့ Web Application ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ.....အကြံပေးကြတဲ့ ကိုစေတန်ရယ် ...ကို CalmHill ရယ်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...နောက်လည်းကျွန်တော်မေးပါအုံးမယ်..သိချင်တာတွေကများတယ်....လေ့လည်းလေ့လာနေတယ် မေးပါများစကားရဆိုသလို ကျွန်တော်ကိုအမေးအမြန်းထူတယ်လို့လည်းထင်မှာစိုးပါတယ်.....